Ku Dhis Meheraddaada Instagram ▷ ➡️ Kuwa Raaca ▷ ➡️
Meheraddaada ku dhis Instagram
December 15, 2018 0 comments 747
Sida ganacsigaaga loogu abuuro Instagram si lacag lagu kasbado
Sida shabakadaha kale ee bulshada, Instagram Waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhiso astaantaada ganacsigaaga marka loo isticmaalo habka saxda ah iyo caqliga leh. Instagram waxay u adeegtaa sidii aalad si ay ganacsigaaga uga dhigto macaamiisha. Sidoo kale Waxaan kuu sheegeynaa sida loo soo dejiyo sheekooyinka hore ee 'Instagram'.
Suuqgeynta warbaahinta bulshada iyadoo la adeegsanayo barta bulshada waxay u furi kartaa adduunyo fursado badan oo sumaddaada ah. Sidaa darteed, waa iska cadahay taasi Instagram waa mid aad u muhiim ah ganacsigaaga. Su'aasha ayaa ka soo baxda sida aad ganacsigaaga ugu dhisi karto Instagram iyo hoosta waa jawaabta su'aashaas.
Marka hore, waa inaad sameysaa baaritaan si aad u ogaato waxa ugu fiican Shirkadaha Instagram. Waa inaad sidoo kale baartaa magacyada kale ee wershadaha sidoo kale aadna ogaatid cidda kula tartameysa sidaa darteed waad ogaan kartaa xeeladaha loo adeegsado dhisida ganacsigaaga. Waa inaad had iyo jeer dejiso yoolalka dhabta ah ee Instagram ee la xiriira yoolalkaaga ganacsiga.
Ujeeddooyinkan waa inay kujiraan kordhinta wacyiga iyadoo la raacayo hagidda hashtag. Kordhinta wacyiga badeecada iyo kordhinta taraafikada boggaaga. Waxaan sidoo kale kuu sheegaynaa sida naafo Instagram.
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo dhiso astaantaada barta Instagram
Marka xigta, waa inaad sameysataa istiraatiijiyad aad ku daabacayso waxyaabahaaga. Halkan waa inaad tixgelisaa inta jeer ee aad daabacan, waqtiga daabacaadda iyo doorashada mowduucyada nuxurka. Waa inaad ilaalisaa daabacaad joogto ah isla markaana, isla mar ahaantaana, iska ilaali daabacaadda xad-dhaafka ah.
Recuerda que Instagram Waxay dhammaan ku saabsan tahay muuqaallada. Sawirkaaga astaanta guud waa inuu ahaadaa astaanta shirkaddaada. Waa inaad doorataa shaandha aad u adeegsan doontid inta badan sawirradaada. Xulashada shaandhada sawirradaada waxay ka dhigeysaa astaantaada mid fudud oo lagu garto. Sawiradaada ayaa u sahlan kuwa raacsan. Hubso inaad dhejiso sawirro muujinaya dabeecadda iyo dhaqanka ganacsigaaga.
Haddii aadan hubin sida muuqaal ahaan loogu matalayo shirkaddaada, waa inaad tixgelisaa la socoshada akoontiga kuwa raacsan si aad u ogaato waxa ay wadaagaan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ogaato isbeddeladaada, sidaa darteed, waxay kaa caawin doontaa inaad ganacsigaaga u soo bandhigto si hufan. Waxaan sidoo kale kuu sheegnaa sida loo furo Instagram.
Farsamo kale oo aad u isticmaali karto horumarintaaga ganacsiga gudaha Instagram Waa astaanta hashtag. Waa inaad heshaa xashiish kaas oo ku daraya astaantaada Instagram oo aad ku dhiirrigeliso kuwa raacsan inay la wadaagaan sawirro ku habboon muuqaalkaas. Tani waxay u oggolaaneysaa meheradahaaga inay u soo bandhigaan macaamiisha cusub ee suurtagalka ah tanina waxay fursad u tahay ganacsigaaga inuu koro.
Sidoo kale waa inaad tixgelisaa calaamadaynta juqraafi ahaan. Kani wuxuu ku darayaa goobtaada sawiradaada markaad daabacdo. Waa mid wax ku ool ah maxaa yeelay waxay ka dhigaysaa kuwa raacsan inay ogaadaan halka laga helo adiga iyo shirkaddaada.
Intaas waxaa sii dheer, kuwa raacsan ee kugu dhow dhow ayaa jeclaan doona is-dhexgalkaaga iyo ganacsigaaga. Waa inaad sidoo kale daabacdaa dalabyo gaar ah, taasna waad awoodaa ka iibsato kuwa raacsan barta Instagram.
Tan waxaa lagu samayn karaa iyadoo la siinayo qiimo-dhimista kuwa raacsan, waxay iyaga ka dhigi doontaa inay dareemaan wax gaar ah, sidaa darteed, waxay dadka kale u sheegi doonaan ganacsigaaga. Instagram waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhiso meheraddaada, maanta tijaabi oo ka faa'iideyso faa'iidooyinka.
Waxaad sidoo kale laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad soo dejiso barta Instagram tooska ah.
1 Sida ganacsigaaga loogu abuuro Instagram si lacag lagu kasbado
2 Waxaan kuu sheegeynaa sida loo dhiso astaantaada barta Instagram
3 Meheraddaada ku dhis Instagram
Ma fiicantahay in kuwa raacsan loo iibsado shabakad bulsho?
Lacag ku hel Instagram si fudud